MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: UINITY IS STRENGTH!
UINITY IS STRENGTH!
(An Article From - http://saveburma.sosblog.com/Burma-political-blog-b1/Time-to-Unite-b1-p50370.htm)
It has beenalong time that i did not writeapost on my blog as i was really busy with my studies. However, there werealots of changes in Burma during these days like sentencing 65 years to 88 students leaders. Moreover, they put lawyers who do cases for NLD and opposition leaders into jails
Where is the justice ? Absolutely there is no such thing in our country at the moment as they do whatever they want. Unfortunately, exiles people are not united at this stage. We heardalots of disagreement between NCGUB and MPU. Here, i would like to advise to those people that we look forward to get democracy so we should focus on what we can do to make changes in our country rather than chasing for position in an organization like NCGUB. History will decide everything. You do not need to worry about what others did but you should concentrate on what you can do for our country.
Sadly, some people (i don't mean all) i saw on exile are earning money for themselves from fund raising activities for our country. How bad it is ? I am sure that some of the people do their best.
What is the plan next for our country?
2010 election is coming soon ?
Will we do together or separately ?
There are thousands of political prisoners there in our country and millions of people are suffering and waiting the period of change.
There is only one solution to these questions ?
" We have to unite and makearespectable organization exile which links to all other countries and people in our country, Burma"
Therefore, It is the time to pay respect each other and forgot about personal problems and looking forward about future of our country. And then we can make an important decision at least for our country.
(မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုသူ - ညိုကြီး)
ကျွန်တော်လည်း သင်ယူမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့ အတော်ကြီး နပန်းလုံးနေရလို့ ဘလော့ဂ်မှာတောင် စာမရေးဖြစ်တာ တော်တော်ကြာသွားပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ ဒီရက်ပိုင်း ဗမာပြည်တွင်းမှာ တရစပ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကြောင့် ဒီစာကို ကျွန်တော် ရေးဖြစ်သွားတယ်။
ခင်ဗျားတို့ သိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ စစ်အဆိုးရက ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို ထောင်ဒဏ် (၆၅)နှစ်စီချမှတ်လိုက်တယ်။ ဒါ့အပြင် တရားရုံးမှာ အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့ အစွပ်စွဲခံ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဘက်ကနေ ရှေ့နေအဖြစ် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေကြီးတွေကိုပါမချန် စစ်အဆိုးရက ထောင်သွင်း အကျဉ်းချပစ်လိုက်ပြန်တယ်။
စစ်အဆိုးရက သူတို့ စိတ်ထဲ ထင်ရာမြင်ရာ၊ လုပ်ချင်ရာ စွတ်လုပ်နေတဲ့ အခုလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ တရားမျှတမှုဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်တွင်းမှာ လုံးဝ ပျောက်ဆုံး၊ ပျက်သုဉ်းသွားပါပြီ။
ဒီအခါမှာ လူမိုက်(စစ်အဆိုးရ) ကံကောင်းဖို့ဖြစ်နေစေတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကို ဘွားကနဲ သွားတွေ့လိုက်ရတယ်။ အဲဒါကတော့ ပြည်ပရောက်နေတဲ့ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ အခုအချိန်ထိ အချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိ၊ ပေါင်းစည်းလို့ မရနိုင်သေးတာပါပဲ။ ဥပမာ- NCGUB နဲ့ MPU အဖွဲ့တွေကြားမှာဖြစ်နေတဲ့ ငြင်းခုန်၊ ကွဲလွဲ၊ ရန်စောင်မှုသတင်းတွေကို အများကြီး ကျွန်တော်တို့ ကြားနေရတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တစ်ခု အကြံပေးလိုတာကတော့ ဒီလိုတွေ ငြင်းခုန်ကွဲလွဲရန်စောင်နေမယ့်အစား၊ NCGUB အစရှိသော ပြည်ပရောက် အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ နေရာတစ်နေရာရဖို့ လုပ်နေကြမယ့်အစား (ရှင်းရှင်းပြောရရင်) နေရာလု၊ ခွက်စောင်းခုတ်နေကြမယ့်အစား ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ဗမာပြည် ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အရေး၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ပေါ်ပေါက်ဖို့အရေးအတွက် ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အပိုင်းကနေ ရှေးရှုလုပ်ကြဖို့ အထူးအာရုံစိုက်ရမယ့် အချိန် ရောက်နေပါပြီ။
သမိုင်းကပဲ အရာရာကို ဆုံးဖြတ်သွားပါလိမ့်မယ်။
တကယ်တော့လည်း အခြားသူတွေ ဘယ်ခြေလှမ်းလှမ်းနေမှာပဲဆိုပြီး စိုးရိမ်တွေးတောပူပန်နေတာထက် ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် ခင်ဗျားဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကို ပိုပြီးအာရုံစိုက်သင့်ပါပြီ။
၀မ်းနည်းဖို့ကောင်းတဲ့၊ ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အချက်တစ်ချက်ကို ပြောရရင် ပြည်ပရောက် အချို့သော အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားတွေ (အားလုံးကို မဆိုလိုပါ) ဟာ ဗမာပြည်အတွက်၊ ဗမာပြည်အတွက် ဟစ်ကြွေးပြီးသကာလ ပြည်ပမှာ ကောင်းကောင်းစား၊ ကောင်းကောင်းနေနိုင်ဖို့အတွက် ၀င်ငွေတွေထပ်ထပ်တိုးအောင်သာလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာနေကြတာပါ။ ကဲ...ဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့ အဖြစ်လဲ။ ဘယ်လောက်စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းသလဲ။
ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်၊ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်း မရှိမဟုတ်ပါဘူး။ ရှိပါတယ်။
ကဲ...အခု ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်အတွက် နောက်ထပ် ဘာတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲ။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကြီးကလည်း မကြာခင် တကယ် ရောက်လာတော့မှာလား။
စစ်အဆိုးရကို ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်း စုပေါင်း၊ စုစည်းပြီး တိုက်မလား၊
အခုလိုပဲ အယူအဆအမျိုးမျိုး၊ အဖွဲ့အမျိုးမျိုးခွဲပြီး ကွဲပြီး တကွဲတပြား တိုက်မလား။
ပြည်တွင်းမှာတော့ များစွာသော အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ ထောင်ထဲကို ၀င်ပြီးရင်း ၀င်နေကြရတယ်။ ကျန်တဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေခမျာမှာတော့ ပြောင်းလဲမှုကို မျှော်လင့်စောင့်စားရင်းနဲ့သာ ရင်မောပြီးရင်း မောနေကြရတယ်။
“ပြည်ပရောက်နေတဲ့ ခင်ဗျားတို့၊ ကျွန်တော်တို့တွေ သူတို့တွေအတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲ။”
ဒီနောက်ဆုံးမေးခွန်းအတွက် အဖြေဟာ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။
"ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်း ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ပေါင်းတိုက်မှ ရတော့မယ်။ ဗမာပြည်ပြင်ပ တိုင်းပြည်အသီးသီးမှာရောက်နေတဲ့ အတိုက်အခံတွေရော၊ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ အတိုက်အခံတွေရောနဲ့ပါ အားလုံးချိတ်ဆက်စုပေါင်းထားတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ ညီညွတ်စွာ ပေါင်းဖွဲ့မှရတော့မယ်" ဆိုတာပါပဲ။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီအချိန်ဟာ အတိုက်အခံတွေအချင်းချင်း တစ်ဦးကို တစ်ဦး ရိုသေလေးစားပြီး၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်ပြဿနာတွေကို မေ့ဖျောက်ထားပြီး ဗမာပြည်ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် ရှေ့ခရီးဆက်ရမယ့် အချိန်ကို ရောက်နေပါပြီ။
အဲဒါမှသာ ကျွန်တော်တို့ဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးပါအရာရောက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ အောင်မြင်ပေါက်မြောက်အောင် ဆုံးဖြတ်ချမှတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ။
Posted by Nyo Gyi at 21.11.08
ပြည်တွင်း၊ နိုင်ငံတကာအခြေအနေများနဲ့ ကျွန်တော်တို့
အခုတလော ပြည်တွင်းမှာ ဖိနှိပ်မှုတွေက မီးကုန်-ယမ်းကုန်အောင် ဆိုးရွားနေပါတယ်။ အကြမ်းမဖက်နည်းနာတွေကို လာသင်ပေးသူတွေရဲ့ သင်ခန်းစာထဲမှာ ဆန္ဒပြသူတွေရှေ့မယ် အမျိုးသမီးတွေကိုထားပေးရင် နှိပ်ကွပ်မဲ့ ရဲတွေ-လုံထိန်းတွေအဖို့ နှစ်ခါပြန်စဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့အကြံပေးတာရှိပါတယ်။ ၂၀၀၇ စက်တင်္ဘာမှာ အမျိုးသမီးလောက်တော့ စာရင်းမသွင်းနိုင်ဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်။ သံဃာတော်တွေကို နှိပ်ကွပ်၊ စီးနင်း၊ ဖမ်းဆီး၊ သတ်ဖြတ်တဲ့အခါ ပြည်တွင်း-ပြည်ပ သြချခဲ့ရတယ်။ (နာဂစ်)ဖြစ်လို့ တိုင်းတပါးကနေ တာဝန်အရရော စေတနာနဲ့ပါ ကူမဲ့-ကယ်မဲ့သူတွေကို တားမြစ်-ဖင့်လေးတာတွေလုပ်ပြန်တော့၊ ကမ်းကုန်ရောလို့ ပြောရပြန်တယ်။ နောက်တခါလာပြန်ပြီဟေ့ဆိုရပါမယ်၊ ဘုန်းကြီးဆွမ်းကြွေးတဲ့သူ၊ လူတွေမသုံး သုံးအောင် အစွမ်းကုန် အားပေး-စီစဉ်ပေးရမဲ့ သတင်းနည်းပညာတွေကို သုံးမိသူတို့ စတဲ့သူတွေကို ထောင်ချလိုက်တာ ကြုံဘူးပေါင်-ဂုဏ်ထူးဆောင်လို့ ပြောရပြန်ပြီ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့် ရှိပြီးသား နိုင်ငံရေးသီအိုရီတွေ၊ နည်းနာတွေ၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေ ခေတ်မမီအောင် ဖြစ်သွားရပါတော့တယ်။
နိုင်ငံတကာစဉ်မြင့်မှာလည်း ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဒီနှစ်မှာ ထူးခြားတဲ့ ခံစစ်နဲ့ စစ်အုပ်စုက စတိုက်လာပါတယ်။ ၁၉၉၂ ကတည်းက အများသဘောတူ (ကွန်ဆင်းဆပ်)ဆုံးဖြတ်ချက် ချလာလိုက်တာ ၂၀၀၇ အထိ။ ဒီနှစ် မဲခွဲတဲ့ (ချဲလင့်)ကို စကျင့်သုံးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။ အရင်နှစ်တွေကတည်းက စကားလုံးအားပြင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ရချင်ပေမဲ့ မဲခွဲတဲ့နည်းကို သွားရမှာမို့ (ကွန်ဆင်းဆပ်)ဖြစ်အောင် ရေရောပေးခဲ့ရတယ်။ အခု စစ်အုပ်စုက မဲခွဲနည်းကို ရွေးလိုက်ပါပြီ။ မဲမခွဲခင် ဘာမှအရေးမယူရေးအဆို (နိုး-အက်ရှင်-မိုးရှင်း) လုပ်လိုက်သေးတယ်။
ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမှာ အဲလိုတိုက်ပွဲတွေကြမ်းနေချိန် ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာလဲ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ အချင်းချင်း ဝေဖန်ရေး(ဘလောကာ)စစ်ပွဲ ဆက်လက်ဆင်နွှဲနေဆဲပါ။ (အင်စီဂျီယူဘီ)နဲ့ပါတ်သက်နေတဲ့ အကြောင်းကိစ္စတွေ ဝေဖန်ကြတာကို ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တရပ်ဖြစ်လို့ ကြိုဆိုပါတယ်။
(စီစီ)ကိစ္စလို့အတိုခေါ်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂမှာ ကုလားထိုင်နေရာ(ချဲလင့်)လုပ်တာက နိုင်ငံရေးပေါ်လစီကိစ္စဖြစ်လို့ လေးလေး နက်နက် သိဘို့-ဆွေးနွေးဘို့လိုပါတယ်။ မီဒီယာမှာပြောရတာမျိုးနဲ့ ဘလော့ခ်မှာရေးရတာမျိုး မတူနိုင်သလို တချို့အပိုင်းကို အတွင်းကြိတ်ဆွေးနွေးဘို့နဲ့ တံခါးပိတ်ပြောရတာမျိုးတို့လဲ ရှိနေပါတယ်။ လုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကနေ အထောက်အထား၊ အကိုးအကား၊ အလားအလာတွေကို သက်ဆိုင်သူတွေဆီ မျှဝေ-ချဉ်းကပ်မှုတွေလုပ်ပါတယ်။ လုပ်ထုံးအရ တာဝန်ခံလုပ်ရမဲ့သူအနေနဲ့ကလည်း တာဝန်မခံနိုင်ရတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကို စာနဲ့ပေနဲ့၊ ပေးသင့်သူများထံ တလေးတစား ရေးသားပေးပို့ ပြန်ကြားထားတာတွေရှိထားပါတယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ အကြား လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က သီးသန့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ နားလည်မှုတွေ တိုးတက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်တွေအကြား မဆွေးနွေးမီ၊ တပ်ပေါင်းစုတွေအကြားမှာလဲ ကျကျနနနည်းပါး ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။
(စီစီ)ကိစ္စက ပညာပိုင်းရော နိုင်ငံရေးပိုင်းပါ နှစ်မျိုးလုံးစုပြီး၊ အပြန်အလှန်ပြောဘို့လိုတာပါ။ ပညာပိုင်းဆိုတာက လုပ်ထုံး-လုပ်နည်း၊ အလားအလာ၊ သမိုင်းကြောင်း၊ ဥပဒေကြောင်းတွေပါ ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးစဉ်းစားချက်ပိုင်းဆိုတာက ကောင်းကျိုး-ဆိုးပြစ်၊ တာဝန်ခံဆောင်ရွက်မည့်သူ စတာတွေ အနည်းဆုံး ပါပါတယ်။ အခုချိန်အထိ အမြင်တွေ ထပ်တူ မကျသေးပေမဲ့ နီးစပ်မှုတွေရှိလာနေပါပြီ။ မတူတဲ့အယူအဆတိုင်းမှာ အားကောင်းတဲ့ငြင်းဆိုချက်တွေ ကိုယ်စီနဲ့ပါ။ တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင်၊ လေးလေးနက်နက် အတူထိုင်ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ (အီမိုးရှင်း)တွေ၊ (ဖရပ်စထွေးရှင်း)တွေကနေ တင်ပြချက်တွေထက် နိုင်ငံရေးအမြင်ဘက်ကို အနိုင်ပေးကြရပါတယ်။ ဆေးခါးကြီးမျိုတာမျိုးလဲ မျိုနိုင်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ အနေအထားတွေကို စိုးရိမ်လွန်းလို့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကြံပေးမှုတွေ၊ ကြားဝင်တာတွေကလဲ လေးစားဘို့ကောင်းပါတယ်။ အပြုသဘောဆောင်တာရဲ့အကျိုးက အပေါင်းလက္ခဏာကို ရစေပါတယ်။
ဒီအချက်တွေက ထုတ်နုတ်တာတွေသာဖြစ်ပြီး အကုန်အစဉ်မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဆိုချင်တာက မပြည့်မစုံသိရ၊ ကြားရတာလေးတွေနဲ့တော့ အမှန်ကို ကောက်ချက်ဆွဲမရနိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာလေးတခု တင်ပြလိုပါတယ်။ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးမှ (အင်စီဂျီယူဘီ)သို့ တိုက်ရိုက်ပေးစာဆိုတာကို (ဘလော့ခ်)တခုမှာ ကံအားလျော်စွာ ဖတ်ရပါတယ်။ “ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကြောင်းပြချက်က အမျိုသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်နဲ့ စစ်အစိုးရတို့ အကြား စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကို ထိခိုက်ပျက်ပြားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်”လို့ ပါတဲ့အချက်ဟာ (အမ်ပီယူ) အမြဲတန်းကော်မတီထံ ၃၀-၁၀-၀၈ နေ့ကပြန်ကြားခဲ့တဲ့ (အင်စီဂျီယူဘီ)ရဲ့တရားဝင် အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ အတော်ကြီး ကွဲလွဲနေပါတယ်။ ၃-၁၁-၀၈ နေ့မှာ (အမ်ပီယူ)ကနေ (အင်စီဂျီယူဘီ)ကိုပေးတဲ့စာမှာပါတာတွေနဲ့လည်း ကွဲလွဲ နေပြန်ပါသေးတယ်။ အဲလို အနီးကပ်-အတွင်းကပုဂ္ဂိုလ်များကတောင် ကိုးကားချက်တွေ လွဲနေရင် တခြားလူတွေဆို ပိုပြီး အမှန်ဖြစ်တာ-ရှိတာတွေနဲ့ အလှမ်းဝေးနိုင်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပါ။
၂၁-၁၁-၀၈ နေ့၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ(၆၃)ကြိမ်မြောက် အထွေထွေညီလာခံ၊ တတိယကော်မတီ၊ ၄၄-၄၅ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး၊ နိုင်ငံ(၃)နိုင်ငံတို့၏ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်သောဆုံးဖြတ်ချက်၊ (document A/C.3/63/L.33) မှတ်သားသင့်သည့်အချက်အလက်များ၊
ထို့နောက် ဥက္ကဌကအစည်းအဝေးခေတ္တရပ်နားသည်။ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်က လုပ်ထုံးအရ မဲခွဲခြင်းပြုလုပ်နေစဉ် ရပ်တန့်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုရာ ဥက္ကဌက မဲခွဲခြင်းမလုပ်ရသေးကြောင်းပြောသည်။ ဆူဒန်ကိုယ်စားလှယ်က အရေးယူရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးလည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကြားနာခြင်းလဲလုပ်ပြီးကြောင်း ထို့ကြောင့်မဲခွဲနေသည့်သဘောဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြသည်။ အတွင်းရေမှူးအဖွဲ့မှ ဥက္ကဌကမကြေညာသေးပါက မဲမခွဲကြောင်းထာက်ပြသည်။ ထိုအခါ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်က ဥက္ကဌအဆုံးအဖြတ်ကို လိုက်နာပါမည်ဟုပြောသည်။
GUNS ABOVE THE LAW (a List)